XOG: Dadka ugu hantida badnaa adduunka oo qasaaray 35 milyaar Daqiiqado gudahood#sabab | Xaqiiqonews
XOG: Dadka ugu hantida badnaa adduunka oo qasaaray 35 milyaar Daqiiqado gudahood#sabab
maalintii shalay aheyd waxa qasaara ay soo gaartay in ka badan 500 oo qof oo lagu tirin jiray dadka ugu hantida badna aduunka.
sababta ugu badan ee qasaaraha keentay ayaa lagu sheegay ceebaha harreeyey Madaxweyne Donald trump ee dhawaanahan soo baxay ee ku aadanaa in trump uu bixiyey sirihii dowladda.
sida lagu daabacay warbixino dhawaan la qoray raggan ayaa isku darkooda heystay lacagyow dhan 4.9 Tiriliyan oo dollar-ka mareekanka ah.
ninka ku jira kaalamaha hore ee xagga maalqabaneeda aduunka Bil Gates ayaa qasaaray mar kaliya lacag dhan hal milyaar oo dollar taasi oo la xariirta hoos u dhaca ku yimid shirkaddii uu lahaa maalqabeenkan oo lagu magacaabo Microsoft.
dhanka kale waxaa isna Mark Zuckerberg oo ah ninkii aasaasay shirkadda facebook waxaana warbixintu sheegay in Mark Zuckerberg uu qasaaray lacagyow dhan labo milyar Oo dollar waxaana hadda lagu qiyaasayaa lacagta uu leeyahay maalqabeenkani Mark Zuckerberg lacag dhan 6.2 milyaar.
sidoo kale mid waxaa qasaaro xooggan uu soo gaaray shirkado badan fadeexadii ugu danbeysay ee harreysay Donald Trump darteed waxaana ka mid ah milkiilaha shirkadda Amazon .